Can Orange kitra :norombahin’ny sekoly Paul Minault ny amboara | NewsMada
Can Orange kitra :norombahin’ny sekoly Paul Minault ny amboara
Nifarana ny alahady teo ny fifaninanana « Can Orange kitra », natokana ho an’ireo eny anivon’ny lycée. Nibata ny amboara ny avy amin’ny sekoly Paul Minault rehefa nandresy 1 no ho 0 ny Les Elites Andoharanofotsy teo amin’ny famaranana natao teny amin’ny kianja tsy bozaka voajanahary eny amin’ny Akamasoa. Fahatelo kosa ny avy eny amin’ny lycée Ambohitrimanjaka, nandresy ny LTC Ampefiloha tamin’ny isa 2 no ho 1.
Nanolotra ny amboara ny mompera Pedro sy ny eo anivon’ny ligin’Analamanga. Tsiahivina fa 16 ireo ekipa avy amin’ny sekoly nandray ary nampiarahana tamin’ny Can 2017 natao tany Gabon. Nisalotra ny anaran’ireo ekipam-pirenena niatrika izany ireo ekipa nandray anjara tamin’ity fifaninanana ity.
Tanjon’ny Orange tamin’ny fikarakarana ny lalao ny firaisan-tsaina sy firaisankina eo amin’ny samy tanora na koa ny fifampizarana. Efa nanao hetsika tahaka izao koa izy ireo an-taony maro, indrindra ny kitra, anisan’ny lalao ankafizin’ny maro.